Sahanka Siyaasada | Radio Himilo
Home / Sahanka Siyaasada
Dhageyso: Barnaamijka Sahanka Siyaasadda.
radio himilo November 21, 2016	Idaacadda Himilo, Sahanka Siyaasada Leave a comment 146 Views
Barnaamijka Sahanka Siyaasadda waa toddobaadle aad ka maqashaan Idaacadda Himilo, toddobaadkan waxa aan kaga hadli doonaa raadka ay reebi karto doorashadii madaxweynaha madaxweynaha Mareykanka Mr Trump. Waxaa marti noogu ah Dr Cabdiraxmaan Badawi. Ismaaciil Maxamed Samatar ayaa soo jeedinaya. Halkan Hoose ...
radio himilo October 10, 2016	Idaacadda Himilo, Sahanka Siyaasada, Uncategorized Leave a comment 143 Views
Barnaamijka Sahanka Siyaasadda waa toddobaadle aad ka maqashaan Idaacadda Himilo, toddobaadkan waxa aan kaga hadli doonaa xaaladda cakiran ee taagan bariga dhexe gaar ahaan dalka Siiriya. Waxaa marti noogu ah Cabdkariin Daa’uud, oo ka faalooda arimaha bariga dhexe. Shaafici Ibraahim Cabdi ayaa soo jeedinaya. ...
Dhageyso: Barnaamijka Sahanka Siyaasadda Ee Idaacadda Himilo.
radio himilo October 3, 2016	Idaacadda Himilo, Sahanka Siyaasada Leave a comment 203 Views
Barnaamijka Sahanka Siyaasadda waa toddobaadle aad ka maqashaan Idaacadda Himilo, toddobaadkan waxa aan kaga hadli doonaa Sida Ay u Arkeen shacabka reer falastiin Madaxweynahooda oo ka qeyb galay Aaskii Shimon Peres. Waxaa marti noogu ah Cabdulaahi Cumar Maxamed , oo safiirka dhalinyarada ...
radio himilo July 11, 2016	Idaacadda Himilo, Sahanka Siyaasada, Wararka Leave a comment 120 Views
Barnaamijka Sahanka Siyaasadda waa toddobaadle aad ka maqashaan Idaacadda Himilo, toddobaadkan waxa aan kaga hadli doonaa Mowduuc quseeya waxa keena Loolanka Siyaasadda iyo sida ay tahay dawadiisa. Waxaa marti noogu ah Cabdulaahi Axmed Siyaad Aashaaa, oo darajada koowaad ku heysta diyaarinaya cilmiga Siyaasadda ...
radio himilo May 2, 2016	Idaacadda Himilo, Sahanka Siyaasada, Wararka Leave a comment 1,221 Views
Barnaamijka Sahanka Siyaasadda waa toddobaadle aad ka maqashaan Idaacadda Himilo, toddobaadkan waxa aan kaga hadli doonaa Cilmiga Siyaasadda. Waxaa marti noogu ah Cabdinaasir Shaafi Yuusuf, oo darajada koowaad ku heysta diyaarinaya cilmiga Siyaasadda. Ismaaciil Maxamed Samatar ayaa soo jeedinaya.
radio himilo April 25, 2016	Idaacadda Himilo, Sahanka Siyaasada, Uncategorized, Wararka Leave a comment 86 Views
Barnaamijka Sahanka Siyaasadda waa toddobaadle aad ka maqashaan Idaacadda Himilo, toddobaadkan waxa aan kaga hadli doonaa nidaamka keligii taliska, waxaan midmid isku dul taagi doonaa asal ahaan halka uu salka ku hayo, haddii la ogyahay xilligii uu soo ifbaxay, astaamaha ...